भिडियो – Krazy NepaL
पछिल्लो दिनहरुमा केटाकेटाबिच बिवाह भएको हामिले सुनेका हौ देखेका पनि हौ अहिले सोही परिदृश्य अनुरुप केटिकेटिले समेत बिवाह गरेका छन् ।नेपाली समाजमा यस्तो गतिविधि अलिक अस्वभनिय मानिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय जनतमा भने यस्तो किसिमको बिवाहलाई सामान्य रुपमै लिइन्छ ।से`क्स मात्रै हैन आवश्यक जीवन जिउनको लागि भन्दै आफुहरु बिवाह पछि एकदमै खुसि भएको बताउछन् । समाजले के भन्ला या कसरी स्विकार्ला भन्दापनि हामिले कसरी समाजलाई लिरहेका छौ र हाम्रो खुसि समाजले निर्धारण नगर्ने समेत बताउछन्। बास्तवमा हरकोहिलाई स्वतन्त्रता पुर्वक आफ्नो इच्छा अनुरुप बाच्ने अधिकार छ ।कोहि माथि टीका-टिप्पणी गर्नुभन्दापनि प्रकृतिको बर्दानलाई स्विबार्दै अझ हौसला दिने होभने मात्रै हाम्रो समाजले कोल्टे फेर्ने थियो कि ? https://youtu.be/kZTcsG0Q6Qs पछिल्लो दिनहरुमा केटाकेटाबिच बिवाह भएको हामिले सुनेका हौ देखेका पनि हौ अहिले सोही पर
पोखरा । नवबिबाहित अभिनेत्री आँचल शर्माका लागि अत्यन्तै दुखद खबर आएको छ । उनले भर्खरै मात्र डा. उदिप श्रेष्ठसँग धुमधामका साथ बिबाह गरेकी थिइन् । त्यो निक्कै गसिप बनेको थियो । उनीहरुको बिबाहमा देखिएको तडक भडक देखि पुर्व प्रेमिकाको बारेमा हिजो आज निक्कै चर्चा भईरहेको छ । करिब एक वर्षको प्रेम सम्बन्धलाई उनीहरुले केहि साता अगाडी मात्र विवाहमा परिणत गरेका हुन् । निक्कै हुने खाने परिवारका यी दुवैले आफ्नो विवाहमा राम्रै खर्च गरेका थिए । स्टार होटेलमा रिसिप्सन देखि हेलीकप्टरमा गरिएको सवारीले फिल्मी नगरीमा एउटा तहल्का नै मच्चायो ।यी दुइजना नया जीवन सुरु गर्दै गर्दा अर्को गसिपले पनि बजार तातिएको छ । हुनत उदिप श्रेष्ठले स्वीकारी सकेका छन । उनको पुर्व प्रेमिकाको बारेमा बोलिसकेका छन । उनको पहिलो प्रेमिका भने फिलिपिनी हुन् । दोस्रो प्रेमिका भने नेपाल कै हुन् । ति नेपाली प्रेमिका अरु कोहि नभएर नेपाल
कलाकारलाई राष्ट्रिय गहना भनेर नामाकरण गरिएको छ ।तर यी चेलि बी स बर्षको कलिलै उमेरमा जीवन र मृ त्यु सग लडिरहेकि थिइन ।निसा घिमिरे नेपाली चलचित्र र मोडलिङ क्षेत्रमा उनिले १२ वटा भन्दा धेरै गितहरुमा आफ्नो अभिनय दिसकेकि थिइन ।सुखमा मात्रै सबै भए दु ख मा कोहि भएनन् ,कठै। आफ्नो कलाकारितालाई अझै निखार्दै र मजबुत बनाउने उदेश्यका साथ उनी भारत लागिन तर दैवको खेला यस्तो भैदियोकि उनको कार ए क्सि डेन्ट भयो र अन्ततः अहिले यस्तो दयनिय अवस्थामा आफ्नो जीवन बेथित गर्न बिबस भएसगै उनी अहिले यो संसारबाट नै बिदा लिसकेकि छिन् ।भरखरै सपना देख्दै थिइन यथार्थ नभई उनी यसरी ल म्प सार भएर हस्पिटलको बेडमा सुत्न बाध्य थिइन । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा पहिले उपचारत निसाको होस् नै थिएन पुरै बेहोस् थिइन ।पछिल्लो समय भने उनको उपचार नर्भिक अस्पतालमा भैरहेको थियो । सामान्य शरिरिका अंगहरुको मात्रै ह र्क त थियो अरु केही प
शुक्र ग्रह सौर्य मण्डलमा सूर्यबाट दोस्रो ग्रह हो। यस ग्रहको सतह चट्टानले बनेको छ र यसको वायुमण्डल कार्बन्डाईअक्साइड् र बिषालू सल्फ्युरिक् एसिडले बनेको हुन्छ। पृथ्वीको सामान्य तापक्रममा सल्फ्युरिक् एसिड तरल अवस्थामा हुन्छ तर शुक्र ग्रह यती तातो छ की शुक्र ग्रहमा भएको सल्फ्युरिक एसिड वाष्पीकरण भएर ग्यासको रूपमा पाइन्छ। हरित गृह प्रभावका कारण यो ग्रह सौर्य परिवारको सबै भन्दा तातो ग्रह बनेको छ जसका कारण पृथ्वीमा बस्ने कुनै पनि सजीव वस्तु त्यहाँ जीवित रहने कल्पना समेत गर्न सकिँदैन। यसको वायुमण्डलमा रहेको बाक्लो बादलका कारण यस ग्रहको सतह राडारको सहायताले मात्र पहिल्याउन सकिन्छ। शुक्र ग्रह आकारमा पृथ्वीभन्दा अलिकति मात्र सानो छ । पृथ्वीको व्यास १२ हजार आठ सय किलोमिटर छ भने शुक्रको व्यास १२ हजार १०२ किलोमिटर छ । शुक्र ग्रह सूर्यबाट १० करोड ८२ लाख आठ हजार नौ सय किलोमिटरको दूरीमा रहन्छ । यसले
पुजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठको पछिल्लो समय सामाजिक संजालमा एकदमै धेरै चर्चा र खोजिईको जोडि हो ।दुबै जना एकआपसमा प्रेममा छन् या छैनन् यो सधै नै चर्चाको बिषयनै रहन्छ र काहिकतै सोधिहाल्दा आफुहरु राम्रो मिल्ने साथि मात्रै भएको जिकिर गरेपनि उनिहरु प्रेममा नै भएको जस्तो हाउभाउले भने देखाउछ । अहिले उक्त चर्चित जोडिको मिउजिक भिडियो पनि सार्वजनिक भएको छ । `धर्ति आकाश ´ नामक मिउजिक भिडियो मा अभिनय आकाश र पुजाको छ भने उक्त गितमा स्वर भने दुर्गा खरेल र रोशन अधिकारीको रहेसगै मिउजिक र शब्द भने अर्जुन पोख्रेलको रहेको छ । उक्त मिउजिक भिडियो रिलिज भएको २४ घण्टानै नबित्दै ट्रेन्डिङमा आईसकेको छ र लाखौ दर्शक हरुले हेरसगै धेरैले उक्त मिउजिक भिडियो अथाहा मनपराएका छन् ।आकाश र पुजाबिच अथाहा प्रेम संगालेको शो मिउजिक भिडियो निश्चय पनि ट्रेन्डिङ एकमै आउने सम्भावना अत्याधिक छ र फेरि आकाश र पुजा बिचको प्रेमले अर्को
काठमाडौँ। मेमरी किङ भनेर चर्चामा आएका विजय शाही फेरी चर्चामा आएका छन । तर यो पाली भने उनि नेपाली मिडियामा आएर नभएर विदेशीको युट्युब च्यानलमा आएर चर्चामा आएका हुन् । बिजय शाहीको मेमरी पावरको बिषयमा यस अघि पनि जिज्ञाशा राखेका अमेरिकन मेमरी एथलेट नेल्सन डेलिसले बिजय शाहीलाई आफ्नो युट्युब च्यानल मार्फत ल्याएका छन । नेल्सन आफै अमेरिकाको चार पटक मेमरी च्याम्पियन भएका व्यक्ति हुन् । वास्तवमा नेल्सन नेपाल घुम्न आएको थाहा पाएका विजय शाही आफैले आफ्नो निवासमा बोलाएर आफ्नो कथित मेमरी पावर प्रमाणित गर्ने बताउछन । संयोगवस निषेधाज्ञाको कारण अन्तरास्ट्रिय उडान बन्द हुनाले गर्दा थप एक साता नेल्सन नेपाल मै रोकिनु पर्ने भएको हुदा उनि बिजय शाहीको निम्तो स्वीकार्दै क्यामेरा बोकेर उनि भएको ठाउ पुग्छन । जहा उनि पुग्नु अगाडी नै बिजय बाहेक थप तिन जना व्यक्तिहरु पनि उपस्थित भैसकेका हुन्छन । जस मध्ये दुई जना बिजय
नेपालमै टिकटकबाट महिनाको २ लाख भन्दा बढी कमाउने युवा, हेर्नुहोस सजिलो तरिका सहित
काठमाडौं । तपाइले केहि समय अगाडी देखि बाट सुन्नु भएको कुरा हो कि टिकटकमा पैसा कमाउन सकिन्छ ? तर कसरि भन्ने कुरा प्रायलाइ कमै थाहा छ | आज हामीले यसै बाट नेपालमा बसेर लाखौ कमाएका युवाको बारेमा भिडियो बनाएका छौ | यिनको नाम हो रिदम क्षेत्री जसले महिनामा टिकटकमै लाइभ बसेर २ लाख भन्दा बढी कमाएका छन् र भब्य पार्टी दिएका छन् | संसारमा हरेक मान्छेको एउटै चासो हुन्छ, पैसा कसरी कमाउने ? सुख-सयल कसरी प्राप्त गर्ने ? धेरैले वैध तरिकाबाटै धेरै भन्दा धेरै पैसा कमाउने सोच राख्छन् । कोही सफल हुन्छन् भने कोही असफल हुन्छन् । केहीले भने अवैध तरिकाले पैसा कमाउन चाहन्छन् ।संसारमा अवैध तरिकाले पैसा कमाउने कामले भने सुख होइन, तनाव मात्रै दिने गरेको छ । किनभने उ एकदिन फस्छ, फस्छ । नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशका नागरिकको सोचाई हुन्छ,- आफ्ना छोरा छोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउँ, आफ्नो एउटा सानो घर होस् र परेक